I-China lelona lizwe liphezulu lipapashiweyo ibhodi yesekethe yexabiso lemveliso yelizwe. Okwangoku, ixabiso lokuvelisa i-PCB eAsia lisondele kwi-90% yetotali iyonke. Phakathi kwabo, i-China kunye ne-mpuma ye-Asia zikhula ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, kutheni ufumana umenzi wakho wePCB eTshayina? ...
Ukuhlangabezana neemfuno ezingakumbi ezivela kwiinjineli ezahlukeneyo ze-elektroniki, iitoni zesoftware yoyilo kunye nezixhobo ezibonakalayo kubo ukuba bazikhethe kwaye bazisebenzise, ​​ezinye zezasimahla. Nangona kunjalo, xa ufaka iifayile zakho zoyilo kumvelisi nakwiindibano zePCB, unokuxelelwa ukuba ayisiyi ...
I-PHILIFAST yenza ngokwezifiso uhlobo lwe-PCB ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu. Ngophuhliso olukhawulezileyo noluthe rhoqo lobuchwephesha be-elektroniki, iibhodi zesekethe eziprintiweyo ziyilelwe ngokubanzi kwaye zafakwa kuzo zonke iintlobo zamasimi ukwanelisa iimfuno zoluntu.
Kulo nyaka, ochatshazelwe ngubhubhane wesithsaba esitsha, ukuhanjiswa kwezinto ezibonakalayo zePCB akwanele, kwaye amaxabiso ezinto ezingafunekiyo nawo ayenyuka. Amashishini anxulumene ne-PCB nawo achaphazeleke kakhulu. Kwinkqubela phambili eqhelekileyo yeprojekthi, iinjineli kufuneka ziqwalasele ukuphuma ...
Indlela Ukukhetha PCB umenzi e China?
Ngokukhula ngokukhawuleza kwetekhnoloji ye-elektroniki eChina.Ngaphezulu nangaphezulu abavelisi be-PCB base China babonelela ngenkonzo yabo efanelekileyo kubathengi kwihlabathi liphela. kodwa yintoni ekufuneka siyazi malunga Chinese PCB umenzi xa sisebenzisana nabo? ...